काठमाडौं आउँदै गरेको कैलाश एयरको हेलिकप्टर चरासँग ठोक्कियो, केछ अवस्था ? — Imandarmedia.com
१सप्तरीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु, दुई घाइते
२नेपाल बन्दको पूर्वसन्ध्यामा देशभर मशाल जुलुस, कहाँ-कहाँ भयो विवरणसहित
३वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव सदनमा पेस
४सर्वोच्चकाे बहसमा खैलाबैला मच्चिएपछि ओली सरकारले रातारात गर्यो यस्तो किर्ते काम
५महान्यायाधिवक्ता खरेलद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी राजपत्र इजलासमा पेस
६सवारी साधनको नयाँ लाइसेन्स बनाउन चाहनेहरुलाई खुसीको खबर, हट्यो कोटा प्रणाली
८साँघुरा गल्लीमा मान्छे भर्दैमा के को आमसभा, आमसभा कस्तो हुन्छ २३ गते हेर्नू- ओली
९खुलेको केहि दिनमै बन्द भए विद्यालयहरु, सामाजिक विकास मन्त्रीले गरे यस्तो अपील
१०आत्मालोचना गर्दै प्रचण्डले भने – केपी ओलीलाई तह लगाउन सकेनौं
११भोलि माघ १० गते नेपाल बन्द, कसले किन गर्यो बन्द आव्हान ? हेर्नुहोस बिस्तृतमा
काठमडौं । नुवाकोटमा कैलाश एयरको हेलिकप्टर ठूलो दुर्घटनाबाट बचेको छ । बागलुङबाट काठमाडौं आउँदै गरेको हेलिकप्टर चरासँग ठोक्किएपछि चालकले नुवाकोटमा आकस्मिक अवतरण गरेको प्रदेश ३ का प्रमुख डीआईजी बसन्त लामाले जानकारी दिए ।
हेलिकप्टरमा रहेका सबै ६ जना सकुशल रहेका छन्, एक जना यात्रुको घुँडामा सामान्य चोट लागेको जानकारी आएको लामाले बताए । चरासँग ठोक्किएपछि हेलिकप्टरको अगाडि भागमा सामान्य क्षति भएको छ । उक्त हेलिकप्टरका यात्रु लिन अर्को हेलिकप्टर पठाइएको छ ।
यसैबीच उता म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका–२ बावियाचौरको काफलचौरमा भएको बोलेरो जीप दुर्घटनामा एकको मृत्यु भएको छ, भने पाँच जना घाइते भएका छन् । बाबियाचौर लाम्पाटाबाट सल्लानतर्फ जाँदै गरेको प्रदेश २–०३००१ च ०२५२ नम्बरको बोलेरो जीप आज बिहान भाइबाङ खोला नजिकको सडकबाट खसेर दुर्घटना भएको हो ।
दुर्घटनमा परेर जीपमा सवार ११ वर्षीया बालिका करिस्मा क्षेत्रीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । दुर्घटनमा परी जीपका चालक ४२ वर्षका खुमबहादुर कटुवालसहित पाँच जना घाइते भएका छन् ।
घाइते चालक कटुवाल र उनकी श्रीमती सुनिता क्षेत्री, जीपमा सवार सुकला केसी, कृपा क्षेत्री र राजन क्षेत्रीलाई उपचारका लागि बेनी अस्पताल लगिएको छ ।